कोरोना भाइरस: जीवन रक्षा गर्ने औषधि भेटियो, नेपालमा पनि जताततै सहज र सस्तोमा पाइने ! – All top Here
Home/समाचार/कोरोना भाइरस: जीवन रक्षा गर्ने औषधि भेटियो, नेपालमा पनि जताततै सहज र सस्तोमा पाइने !
विश्वभरको वैज्ञानिकहरु कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन र औ षधि को अनुसन्धान गर्न दिन रात लागिपरेका छन् । तर अहिले सम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसैक्रममा जहाँसुकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने औ षधि डेक्समेथासोनले कोरोना भाइरस संक्रमित गम्भीर बिरामीहरूको ज्यान बचाउन सहयोग पु¥याउन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । बेलायतका विज्ञहरूका अनुसार औ षधि को थोरै मात्रामा प्रयोगले कोरोनाविरुद्धको लडाईमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ ।
गम्भीर बिरामी परेको कारण भेन्टिलेटरको सहारा लिनु पर्ने बिरामीहरू, यस औ षधि को कारण तिनीहरूको मृ त्युको जोखिम लगभग एक तिहाईले घटेको छ। अक्सिजनको खाँचो परेको विरामीलाई समेत औ षधि को कारण कोरोनाबाट मर्ने जोखिम एक तिहाईले कम गरेको बताइएको छ ।
डेक्सामेथासोन एक औ षधि हो जुन सन १९६० को दशकदेखि गठिया र दमको उपचारमा प्रयोग गरिदै आइएको छ । कोरोना आधा भन्दा बढी बिरामीहरू जसलाई भेन्टिलेटर आवश्यक परेको हुन्छ । त्यस्ता विरामी जो बाँच्न असमर्थ हुन्छन् , त्यस्ता अवस्थाका विरामीको जोखिमलाई एक तिहाइले घटाउनु ठूलो सफलता भएको वैज्ञानिकहरुले बीबीसीलाई बताएका छन् ।
अन्वेषकहरूको अनुमान छ, यदि यो औ षधि बेलायतमा संक्रमणको पहिलो चरणबाट प्रयोग गरिएको भए करिब ५००० व्यक्तिको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। यो औ षधि सस्तो पनि भएकोले यसले गरीब देशहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ।यो औ षधि पनि परीक्षणको एक अंश हो जुन हालका औ षधि हरूको बारेमा जाँच भइरहेको छ । तर प्रभावकारिताको हिसाबमा डेक्सामेथासोन नै अगाडि देखिएको छ । कोरोनका २० बिरामीहरूमध्ये १९ जना अस्पतालमा भर्ना नभई निको भइरहेका छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका धेरै बिरामीहरू पनि ठीक भइरहेका छन् ।
अक्सिजन वा भेंटिलेटरको खाँचोमा भएका बिरामीलाई यो औ षधि ले मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यो औ षधि पहिले नै सूजन कम गर्न प्रयोग गरिएको छ र अब अहिले आएर यस्तो अवस्था देखिएको छ कि यसले कोरोना भाइरसविरुद्ध ल ड्न शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सहयोग र्पुयाउँछ ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एउटा टोलीले अस्पताल भर्ना भएका २००० बिरामीहरुलाई यो औ षधि दिएको थियो र त्यसपछि ४००० हजार बिरामीमा भने तुलनात्मक परीक्षण गरियो जसलाई भने औ षधि दिइएको थिएन । भेन्टिलेटरबाट बचेका बिरामीहरूले यस औ षधि को प्रभावबाट म र्ने जोखिम ४० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतमा घटाए, र अक्सिजन चाहिनेहरूले म र्ने सम्भावना २५प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा घटाए।
प्रोफेसर मार्टिन ल्यान्ड्रे, जो यो औ षधि को अर्को एक अर्को शोधकर्ता हुन र उनी भन्छन्, “यस औ षधि को सहायताले भेन्टिलेटरमा रहेका आठ जनामा एक जनाको जीवन बचाउन सक्नुहुन्छ, र अक्सिजनको खाँचोमा परेका बिरामीहरू मध्ये तपाईले प्रत्येक २०–२५ बिरामीहरूको लागि एक बिरामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ।”
उनले अगाडि थपे, “यो स्पष्ट रुपमा सहयोग र्पुयाउने औ षधि हो। डेक्सामेथासोनको दश दिनको उपचार खर्चमा बिरामीको लागि करिब सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसैले बिरामीको जीवन केवल साढे तीन हजार रूपैयाँमा बचाउन सकिन्छ। र यो औ षधि जताततै पाइन्छ। ”
कोरोना भाइरसका गम्भीर बिरामीहरूको ज्यान जोगाउन सहयोग गरेको भनी बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले दाबी गरेको ‘डेक्सामिथासोन स्टेरोयड’ नेपालमा पनि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध छ। यो औषधि नेपालमा पनि दम लगायत हातखुट्टा सुन्निने रोगका बिरामीमा प्रयोग हुँदै आएको टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप बाँस्तोला बताउँछन्।
यो औषधिको प्रभावकारिता थप पुष्टि भए संक्रमितको उपचारमा ठूलो सघाउ पुग्ने उनले बताए। यसमा अन्य देशले पनि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै उनले यसको उपयोगिता अन्य देशको अनुसन्धानमा पनि निर्भर हुने जनाए। ‘बेलायतले दाबी गरेको औषधिको प्रभावकारिता थप पुष्टि भए यसले नेपालमा पनि भोलि समस्या आइपरे ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।
यद्यपि यस औ षधि ले कोरोना बिरामीका हल्का लक्षण भएकालाई भने कुनै पनि सहयोग प्रदान गर्दैन। यसैले प्रोफेसर ल्यान्ड्रे भन्छन, आवश्यक परेको बेला अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई मात्र यो औ षधि दिनु पर्छ र मानिसहरूले यो औ षधि बजारबाट किन्ने र घरमा राखेर प्रयोग गर्ने प्रवृतिलाई भने पूरै निरुत्साहित गर्नु पर्छ , यस्को प्रयोग चिकित्सकीय सुझावमा मात्र प्रयोगमा ल्याउने बारे सबैलाई सचेत गर्न जरुरी छ । ’यस्तै अर्को एक औ षधि रेमेडिसेभियर हो, जसको सहयोगमा संक्रमितहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट छिटो निको हुन मद्दत गरिरहेको औ षधि का अन्वेषकहरको निष्कर्ष छ ।